कमिसनको चक्कर! स्वास्थ्यमन्त्रीकै निर्देशनमा विश्वसनियता नभएको आरडिटी किट किन्ने निर्णय – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कमिसनको चक्कर! स्वास्थ्यमन्त्रीकै निर्देशनमा विश्वसनियता नभएको आरडिटी किट किन्ने निर्णय
कमिसनको चक्कर! स्वास्थ्यमन्त्रीकै निर्देशनमा विश्वसनियता नभएको आरडिटी किट किन्ने निर्णय
काठमाडौं– स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालकै निर्देशनमा आरडिटी किट किन्ने निर्णय गरेको छ। जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्दै स्वास्थ्यमन्त्रालयले आरडिटी किट किन्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य अनुसन्धान निकाय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले लामो समय अध्ययन गरी आरडिटी प्रयोग गर्न नमिल्ने रिपोर्ट बुझाएको छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त रिपोर्ट लुकाएर धमाधम आरडिटी किट खरिद गरिरहेको पाइएको छ।
परिषदले तीन साताअघि नै मन्त्रालयलाई कारोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन आरडिटी किट प्रयोग गर्न नमिल्ने रिपोर्ट बुझाएको हो। परिषद्‍ले उक्त रिपोर्ट बुझाइसकेपछि पनि मन्त्रालयले थप एक लाख थान आरडिटी टेस्ट किट खरिद गरिसकेको छ भने थप तीन लाख किट किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र राज्यमन्त्री नवराज रावतको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले किट खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त समितिमा मन्त्री ढकालले नै किट खरिदका लागि निर्देशन दिएको बताइएको छ।
आफूले बनाएको औषधीले कोरोना निको हुने रामदेवको दाबी
दयपुरको मस्जितमा लुकेका १० मध्ये८ भारतीयमा कोरोना पुष्टि